China China Ihowuliseyili yoPhuculo oluPhakamileyo lwexabiso eliPhezulu abavelisi abaHlaziyiweyo beApple kunye nabathengisi | AGR
Ixabiso lesondlo lama-apile
1, iapile luhlobo lokutya okuphantsi kwekhalori, zonke iigram ezili-100 zivelisa ubushushu obuyi-60 kcal.Iiapile zezakhamzimba kwi-soluble, ekulula ukuyifunxa ngumzimba womntu, owaziwa ngokuba "ngamanzi aphilayo". yenza ulusu luthambe kwaye lithambe.
2, iapile "ineziqhamo zobulumko", "isiqhamo sememori" igama elincomekayo. Ukutya ii-apile ezininzi kudala kwaziwa ukuphucula inkumbulo kunye nobukrelekrele.
3. Ii-apile zityebile nge-zinc. Ngokophando, i-zinc licandelo lee-enzyme ezininzi ezibalulekileyo emzimbeni womntu kunye nento ephambili yokukhuthaza ukukhula kunye nophuhliso.
4. Ivumba lama-apile linqandathe ukudakumba noxinzelelo.Iingcali ziye zafumanisa emva kovavanyo oluninzi oluthi, phakathi kwamakha amaninzi, ivumba leapile linefuthe elikhulu kwezengqondo ebantwini, inefuthe elibonakalayo ekuphelisweni koxinzelelo lwengqondo. Isicelo singqine ukuba imeko yezigulana ezinengxaki yoxinzelelo lwengqondo ziphuculwe kakhulu emva kokunuka ivumba leapile, umoya ukhululekile kwaye wonwabile, kwaye imeko yokudakumba yapheliswa.
5. I-malic acid kwii-apile inefuthe elimhlophe.Abantu abaninzi banexhala lomngcipheko wokubola kwamazinyo ngenxa yeasidi yeapile. Ii-apile ezinikezelwe ngeshizi zinciphisa i-asidi, kwaye ukutya ii-apile kunokunceda ekucoceni amazinyo akho ngokufanelekileyo.
Uvithamini C kwii-apile kukukhusela isifo sentliziyo, sezigulana ezinento elungileyo.
Abantu abatya ama-apile amaninzi bebengenakufane babanjwe yingqele kunabo bangatyanga okanye bangaphantsi. Ngenxa yoko, abanye oososayensi noogqirha babize ii-apile “ngeziqhamo ezi-omni-zemiyalelo esempilweni” okanye “iingcali ngokubanzi”. Kubaluleke kakhulu, ukutya ii-apile ngakumbi kunokuphucula inkqubo yokuphefumla kunye nokusebenza kwemiphunga, kukhusele imiphunga eluthulini nakwindawo efumileyo emoyeni.
Egqithileyo Ukuthumela ngaphandle kwesiqhamo esitsha isiqhamo esinexabiso elifanelekileyo
Okulandelayo: Imbali yeNdalo esempilweni ye-Organic Imbewu eqhelekileyo yeGarlic eNtsha
Ukuthumela ngaphandle kwesiqhamo esitsha kunye neziqhamo ...